I-Sun City ne-Safari
Sun City, Madikwe Safari & Cape Town
I-Sun City ne-Safari Escape
Leli Phakheji le-Sun City Safari Holiday ligcwele izinsuku ezingu-5 ligcwele imisebenzi yokuzilibazisa kanye namathuba okubuka umdlalo othakazelisayo ePilanesberg National Park.
Lolu suku lwe-Sun City ne-Safari Escape olunezinsuku ezingu-5 luyisinqumo esiphelele sabahambi abafuna ukuhlanganisa i-Sun City ne-Safari e-Afrika ephumayo. Ukuhweba empilweni yakho yedolobha ukuze ujabulele ubuhle obuhle e-Sun City Resort futhi uhlangabezane nokuphila kwamahlathi e-safari lodge ePilanesberg National Park enkulu.
Gwema ilanga, ujabulele ezindaweni zokudoba amanzi futhi uhlole inhlanhla yakho eSun City Casino. I-resort iyikhaya lezinto eziningi zokudla, izigigaba ezimbili zegalofu, indawo yamanzi kanye nezinye izindawo zokuzijabulisa ezithakazelisayo.
Ngemuva kokuba ubonakale ekuthokozelweni nasezindaweni eziningi zokuzijabulisa, uqede ukuhlala kwakho ehlane lase-Afrika ngethemba lokulandela i-Big Five endaweni yokuhlala yasePilanesberg National Park.
Amaphuzu avelele we-Sun City
Hlanganisa iholidi elivulekile le-resort nge-malaria ephumuzayo mahhala
Ukufinyelela mahhala ku-Valley of the Waves kanye nezinsizakalo zokuhamba nge-shuttle ngaphakathi kwe-Sun City Resort
Yenza izinto ezihlukahlukene ezivela kumakhasino e-casino, i-cabaret ibonisa igalofu
Hlala endaweni yokulala ephephile ebhekene nomfula wamanzi oheha izilwane ezihlukahlukene zasendle
Qalisa ukushayela emidlalweni emnandi ePilanesberg National Park
Day 1: Arrive Sun City
Hamba eGoli futhi ujabulele ukuhamba ngokushelela ukuya eSay City Resort. Abanakekeli bayokusiza endaweni yakho yokuhlala.
Lapho befika, ukudla kwasemini kwenye yezindawo zokudlela eziphethwe yi-resort, ngasinye sigcizelelwe nge-flavoursome ne-authentic cuisine. Uzochitha intambama yakho ngokuzilibazisa futhi kunezinto eziningi zokujabulela eSan City Resort.
Hlanganisa nemidlalo eminingi yamanzi e-Valley of Waves noma ujabulele umdlalo wegalofu kuGary Player naseLost City.
Day 2: Explore Sun City
Jabulela ukudla kwasekuseni okunethezeka kanye nezinkomishi ezimnandi zekhofi noma itiye. Sebenzisa i-ntambama ngesivinini sakho futhi uhlole zonke izici ze-Sun City Resort.
Jabulela ukwelashwa kwe-spa okuvuselelayo ku-Gary Player Health Spa noma ukwelashwa okunethezeka - kufaka phakathi ukuhlalisa i-poolside e-Royal Salon.
Jabulela isipiliyoni esihle sokudlela kwenye yezindawo zokudlela ezingasetshenzisiwe bese uchitha ubusuku e-casino bese uzama inhlanhla yakho emshini kanye namatafula.
Usuku 3 - 4: Safari in Pilanesberg National Park
Jabulela isidlo sasekuseni esiphuthumayo, hlola indawo yokuhlala yase Sun Sun ukuhamba ngokushelela ukuhlala endaweni yakho ephephile ePilanesberg National Park, lapho uzochitha khona ubusuku obubili obulandelayo.
Indawo yokuhlala ye-Malaria-free safari isendaweni enkulu ePilanesberg National Park ebheke emanzini amaningi amanzi. Hamba ngokushayela okuthakazelisayo nakusasa ntambama imidlalo eholwa yiziqondiso ezihlakaniphile nezinolwazi.
Yeka abanikazi bama-sundown futhi bahloniphe ukushona kwelanga okukhulu kwe-Afrika. Landelela inqwaba yezilwane zasebusuku ngesikhathi uhambo lwakho lubuyela endaweni yokulala.
Uma usubuyela ekamu, phuma ngamanzi ngamanzi noma uphumule isiphuzo esiseduze ubuka ukudlula izilwane zasendle. Thola ukudla okuhle kakhulu e-bush ehamba phambili emlilweni oqhaqhazelayo nangaphansi kwezulu elikhanyayo.
Usuku 5: Valelisa
Ngemuva kokuphuma kwakho kokugcina kokubukwa kwegeyimu, thokozela kwasekuseni ekudleni lokubuka futhi ujonge ukubuka okubukeka kahle kwe-waterhole eseduze.
Ngemuva kokudla kwasekuseni kuPilanesberg National Park. Ngaphambi kokuba sihlangane futhi.
Indawo yokuhlala ebusuku 2 eSun City Cascades Hotel kufaka phakathi kwasekuseni
Ukufinyelela mahhala ku-Valley of the Waves eSan City Resort
Izinsizakalo zokuhamba ngempahla ngaphakathi kweSan City Resort
Indawo yokuhlala yokunethezeka ka-2 ebusuku ebusuku e-Pilanesberg-malaria-free safari lodge kuhlanganise nesidlo sasekuseni, isidlo sasemini nesidlo sakusihlwa
Imoto yasemuva nase ntambama iyahamba emotweni evulekile ehamba ngezinyawo ezihambisana nezinsizakalo zasensimini
Imisebenzi e-Sun City (ngaphandle kwesigodi sama-Waves)
Ukudla neziphuzo akucacisiwe
Ukuqasha okukhethwa kukho imoto, uphethiloli nezinye izinto ezengeziwe ukuze zixazululwe ngokuqondile